नेकपाको आदित्य ज्योतिपथ- विविधा - कान्तिपुर समाचार
वैशाख ७, २०७६ युग पाठक
‍ — यो मुलुकमा सिधासिधा भन्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । सिधा कुरा हो, विष्णु पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव हुन् र बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने किर्तेकारितामा उनको मुख्य भूमिका छ । यो पनि उत्तिकै सिधा कुरा हो कि उनलाई भूमाफियाले त्यो जग्गा उपहार दिएको हो । औपचारिकताका लागि बनाइएका कागजपत्रको कुरा गरिरहनु परेन । एउटा जाली वक्तव्य निकालेर उनी उम्कने ठाउँ छैन ।
पौडेललाई चोख्याउन सरकारले प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाको कुटिल अनुहार अगाडि सार्‍यो । सिधा कुरा यो पनि हो कि यस्ता धेरै प्रसंगमा यही अनुहार क्यामेरा अघिल्तिर उभ्याइने गरिएको छ । वाइड बडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि सरकारले यही अनुहार अघि सारेको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको किटान गरेपछि यही अनुहारले कुटिलतापूर्वक समितिको प्रतिवेदनलाई दुत्कारेको थियो । लगत्तै सरकारले लेखा समितिको प्रतिवेदन छल्न आफैं छानबिन समिति बनाएको घोषणा गर्‍यो । अन्ततः त्यो समितिलाई नियुक्ति नै नदिएर विघटन गरियो । हाइसन्चो !
ठमेलमा गुठीको जग्गा मासेर छाया सेन्टर बनाइयो । पत्रकार जेबी पुनले यसबारे अनुसन्धानामूलक विस्तृत रिपोर्ट नै प्रकाशित गरे । स्थानीय जनताको विरोधका बाबजुद नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले चोरबाटोबाट छिरेर छाया सेन्टर उद्घाटन गरे । त्यसैगरी ह्यात होटलले चर्चेको जग्गाका सन्दर्भमा पनि यस्तै शृंखलाबद्ध समाचारहरू प्रकाशित भए । अनेक गुठी लगायत कैयौं सरकारी जग्गाजमिन रातारात व्यक्तिका नाममा सारिएको रहस्योद्घाटन भैरहेको छ । आश्चर्य के भने न नेकपा, नत सरकारलाई नै यस्ता कुराले तातो लगाएको छ ।
पख्नुस्, सिधा कुरा यो हो– आश्चर्य त आम जनतालाई पो लागेको छ, सरकार र नेकपालाई होइन । सार्वजनिक स्मृतिबाट एउटा काण्ड बिर्साउन अर्को काण्डको सिलसिला काफी छ । दुई तिहाइको सरकार बुख्याँचा जस्तो तैनाथ छ, जनताको स्मृति धपाउन । पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गरेर होस् वा कोही गरिब हुनु नपर्ने वायुपङ्खी घोषणा गरेर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुशलतापूर्वक सरकार चलाइरहेका छन् । जनताको बीचमा सबै लज्जा छताछुल्ल भैसकेको समेत पत्तो नपाउनेगरी उनको
वायुपङ्खी सवारी जारी छ । यो स्तरको लज्जा पचाउन सजिलो छैन । धन्न, प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले एउटा चमत्कारी सिद्धान्त पाएका छन्– आदित्य ज्योतिपथ ।
आदित्य एक बिरामी बालक हुन् । यो पनि उत्तिकै सिधा कुरा हो । उनलाई गुगल ब्वाई कसले बनायो ? गुगल भनेको कुनै चमत्कार होइन । अरु विशेषता छाडेर आदित्यको नाममा जोडिएको अर्थलाई मात्र हेर्ने हो भने यो इन्टरनेट वेबसाइट खोज्ने अर्को वेबसाइट हो । अंग्रेजीमा यसलाई सर्च इन्जिन भन्ने गरिएको छ । संसारभरिका वेबसाइटमा राखिएका दर्जनौं भाषाका अनेकन सूचना र ज्ञान यसले खोजेर प्रस्तुत गरिदिन सक्छ ।
आर्किटेक्चरदेखि आइन्सटाइनका जटिल वैज्ञानिक सिद्धान्तसम्म, साहित्यदेखि संगीतका सिर्जनासम्म, पुरातात्त्विक खोजदेखि अन्तरिक्ष विज्ञानसम्म, गणितका अनेक खेलदेखि जोन न्यासको गेम थ्योरीसम्म, जे खोजे पनि गुगल हाजिर छ । आदित्य र उनलाई भगवान बनाउन तम्सिएका मानिसहरूमात्र होइन, आफूलाई चमत्कारी दाबी गर्ने बाबाहरूसम्म कसैले पनि गुगलले देखाउन सक्ने सबै कुरा बुझ्न सक्दैनन् । पुस्तौं–पुस्ताले आविष्कार गरेको र हजारौं मानिसले हजारौं घन्टा खर्च गरेर इन्टरनेटमा राखेको सूचना र ज्ञान कुनै एक मानिसले एउटा जिन्दगीमा न बुझेर सक्छ, न जानेर ।
त्यसैले एउटा बिरामी बालकलाई गुगल ब्वाई भनेर हल्ला गर्नु जति मुर्खतापूर्ण कुरा हो, त्यसलाई पत्याउनु मुर्खताको मूर्ति थापेर पूजा गर्नु जत्तिकै हो । अझ खराब कुरा एउटा बालकलाई बालसुलभ जीवनबाट च्युत गरेर धार्मिक व्यापारको घेराभित्र कैद गर्नु हो । बाल अधिकारको सरासर हनन हो र एक गैरकानुनी काम हो । आदित्यको नाममा धार्मिक प्रतिष्ठान नै बनाएर जानेमानेका व्यापारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायत सक्रिय छन् । अझ खतरनाक कुरा त के भने सरकारले प्रतिष्ठानका नाममा जनताको पसिनाबाट उठेको पैसा खन्याएको छ । आदित्यका नाममा चलेको धार्मिक व्यापारमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र प्रोत्साहन देखिनु आपत्तिजनक हो कि होइन ?
जनताले विवेकको मत प्रयोग गर्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ । त्यो विवेक त्यसपछि विजेता दल र उसले बनाउने सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको मानिन्छ । सरकारले समाजको खुसहालीका निम्ति त्यो विवेक प्रयोग गर्छ । मन्त्रालयहरू, योजना आयोग आदि–आदि त्यही विवेक प्रयोग गर्ने औजार हुन् । ओली सरकारले त झन् भएका संस्थागत संरचनाले नपुगेर नयाँ थिङ्क ट्यांक पनि बनाएको छ ।
प्रश्न उठ्छ– धर्मका व्यापारीहरूले एक बिरामी बालकका नाममा बनाएको आदित्य ज्योतिपथमै हिँड्नुछ भने सारा संस्थागत संरचना किन चाहियो ? सिंगो मन्त्रिपरिषद, योजना आयोग, थिङ्क ट्यांक, कर्मचारीतन्त्र, विश्वविद्यालयहरू के एउटा बिरामी बालकको चमत्कार हेर्न तलब थापेर दर्शकदीर्घामा बसेका हुन् ?
एमाले र माओवादी नामका दुई पार्टी मिलेर नेकपा बनेको सिधा–सिधा सत्य हो । एमालेले बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त मानेको थियो भने माओवादीले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको एक विकसित कार्यदिशा बताएको थियो । एक हुनुभन्दा अगाडि र एक भैसकेपछि उनीहरूले आफूलाई कम्युनिष्टका रूपमा चिनाउँदै आएका छन् ।
कार्ल मार्क्सले संसारलाई दिएको मुख्य ज्ञान हो– मानव समाज कुनै दैवी चमत्कारबाट होइन, मान्छे र मान्छेले बनाएको समाजकै नियममा चल्छ । पछिल्ला शताब्दीमा धर्म र दैवी चमत्कार केवल धार्मिक संस्था र राजनीतिक शक्तिले विभिन्न तहका सत्ता आर्जन गर्न र आफू शक्तिशाली हुन प्रयोग गरिरहेका छन् । याद राख्नुस्, उनीहरूको सत्ताचाहिँ त्यही धार्मिक भावनालाई पनि हिसाब–किताबमा सञ्चालन गरेर मात्र चल्छ ।
नेपालमा जब आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूले आदित्य ज्योतिपथलाई मार्गदर्शन सिद्धान्तको रूपमा खुलेआम उपयोग गर्न खोजेको देखियो, हालसम्म थुपारिएका दस्तावेज केवल भ्रमका पुलिन्दा रहेछन् भन्नुपर्ने भयो । नपत्याए नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नुहोस् । प्रधानमन्त्री ओलीले त आदित्यको अद्भुत क्षमताको दुहाइ दिँदै वैज्ञानिकहरूलाई नै दुत्कारिरहेका छन् । अनि आदित्य ज्योतिपथ उल्लेख गरिएको ब्यानर मुन्तिर ओली र दाहाल दुवै रामनामी वस्त्र ओढेर विराजमान देखिन्छन् ।
सिधै भन्नुपर्छ– नेकपालाई दुई अध्यक्षले आदित्य ज्योतिपथतिर डोर्‍याउनुका दर्दनाक कारण छन् । यो लेखको सुरुमै उल्लेख गरिएका भ्रष्टाचारका नमुनाहरू सम्झौं । अख्तियारदेखि अदालतसम्म, कर्मचारीतन्त्रदेखि सेना र प्रहरीसम्म, अनि ठूला दलहरू सबै भ्रष्टाचारको पाउजेब बजाएर हिँड्न बाध्य छन् । ती पाउजेबका छन्छन् क्षितिजसम्म गुञ्जायमान सुनिन्छ । गोर्खाली सत्ता स्थापना भएदेखि आजसम्म सत्ता र यसका अंगहरूमा पुग्नेले व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न त्यो सत्तालाई प्रयोग गरेको इतिहास छ । आजसम्म सत्ताको दोहन जारी छ । नेकपाले त्यही सत्ताको विरासत धान्ने पछिल्लो मौका पाएको मात्र हो ।
सत्ताको विरासतलाई जस्ताको तस्तै काँध थापेर परिवर्तनको कुरा गर्नु भनेको काशी जाने कुरा गरेर कुतीको बाटो चम्पत ठोक्नु जस्तै हो । यो विडम्बना बाँच्न नेकपा बाध्य छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाज र रेलको उडन्ते गफ गरेर चुनाव जिते, हालसम्म पनि उनको उडन्ते गफ जारी छ । जीवनको सत्य थाहा पाउने मामलामा आमजनता जति चमत्कारी कोही हुँदैन ।
सरकारी स्कुल ध्वस्त हुने क्रम जारी छ, निजी स्कुलमा पढाउने क्षमता आम जनतासँग छैन । एक महँगो निजी अस्पतालको विज्ञापन गर्न प्रधानमन्त्री स्वयम् पुग्छन्, तर आम जनतासँग उपचार नपाएर मर्ने बाहेकको विकल्प छैन । सार्वजनिक अस्पताललाई साधन सम्पन्न र जनताको पहुँचसम्म पुर्‍याउने त परैको कुरो, प्रधानमन्त्री त्यहाँ पनि बिरामी बालकको चमत्कारमाथि प्रकाश पारेर समय बिताउँछन् ।
एक वर्ष पुग्दा–नपुग्दै आफू असफल भैसकेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री र नेकपासँग आदित्य ज्योतिपथ बाहेक के बाँकी छ त ? हो, चमत्कारको भाषण बाहेक नेकपासँग अब केही बाँकी छैन । उसको असफलता छोप्ने हदको प्रयत्न पनि दिनहुँ असफल भैरहेछ । रामनामी ओढेर आदित्य ज्योतिपथको प्रचार गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य छन्, अध्यक्ष दाहाल अभिशप्त छन् ।
नेकपाको आदित्य ज्योतिपथमा धनाढ्या व्यापारी, ठूला कर्मचारी सबै ठूलाहरूको साथ छ । नेकपालाई कम्युनिष्ट पार्टी ठानेर दिनहुँ आफ्नै विवेकमाथि प्रश्न खेपिरहेका नेता–कार्यकर्ता कोही बाँकी छन् भने उनीहरूको हालत हामी बुझ्न सक्छौं ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०८:१०
आश्विन २१, २०७५ युग पाठक
काठमाडौँ — सञ्जीवनी कृषि फर्ममा टलरम्म टमाटर फलेका छन् । टमाटर पाक्ने सिजनमा रीता सुनारका मनमा भने आन्दोलनको मनस्थिति रातै पाकेको छ । भनिएको छ, देशमा समृद्धि नै समृद्धिको एजेन्डा छ । सरकारी भाष्यमा समृद्धि एक मायावी घोडा हो, जो हिनहिनाइरहेको छ ।
समृद्धिको नाद सुन्नु नसुन्नु सुन्नेको कानमा भर पर्छ । रीताका कानमा समृद्धिले कुनै नयाँ धुन बजाएको छैन । भन्छिन्, ‘दु:खजिलो गरेर लगानी गरियो । किसानको सुरक्षा छैन । हामी व्यावसायिक किसानहरू आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं ।’
म सञ्जीवनी फर्म पुग्दा उनी फोनमा अरू व्यावसायिक किसानसँग कुरा गर्न व्यस्त थिइन् । दाङकी रीताले लुभुमा १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर टमाटर फलाएकी छन् । समस्या बजारको छ । भारतबाट सजिलै टमाटर आयात भइरहेकामा उनी खुसी छैनन् । नेपालको तरकारी भारतले आयात गर्दैन, थुप्रै सर्त छन् उसका । नेपालले भने बिनासर्त आयात गर्छ । यताका व्यावसायिक किसानको तरकारी भने सस्तैमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यै पनि बिचौलियाको हात यति बलियो छ कि उपभोक्ताको हातबाट महँगै मोल असुलिन्छ । त्यसैले देशभरका व्यावसायिक किसानलाई संगठित गर्ने प्रयत्नमा लागेकी छन् रीता ।
किसानले कालीमाटी तरकारी बजारमा आन्दोलन गरे, भारतीय तरकारी बोकेको गाडी कब्जामा लिए । कृषिमन्त्रीलाई भेटे । सरोकारवाला सरकारी निकायहरूलाई हारगुहार गरे । व्यापारीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरे । आश्वासनबाहेक कुनै आशाको त्यान्द्रो भेटिएको छैन । उनले सुनाइन्, ‘दहचोकमा एक किसानले आत्महत्याको प्रयास गर्नुभयो । तरकारीको टनेलमै उहाँ झुन्डिनुभयो । ऋणमा डुबेर किसान आत्महत्या गर्ने सोचमा पुग्नु ठीक हो त ? हामी खाडीमा जाने कि बारीमा ? सरकारले भन्दिनुपर्‍यो ।’ आजको मूल्यवान् प्रश्न हो यो– समृद्धिको एजेन्डाले किसानलाई बारीमा लैजाने कि खाडीमा ?
यो एउटा उदाहरण मात्र हो । कृषिलाई व्यवसाय बनाउन खोज्ने युवा किसान नै आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् । आम किसानले त कृषिमा विश्वास गुमाएको धेरै भइसक्यो । दिनहुँ खाद्यान्न आयातको अंक बढ्दो छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिएका छन् वा सहर नजिकका जमिन प्लटिङको सिकार भएका छन् । साठी वर्षदेखि लगातार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो भनिएको छ । रुमानी कवितामा आमालाई सृष्टिकर्ता भनेर बढाइँ गरिए जस्तो । कविताबाट ओझल पर्नासाथ घरघरमा आमाले यातना भोग्नुपरे झैं पञ्चवर्षीय योजनाका किताबबाट बाहिर जीवनमा किसानहरू ताडनामा बाँच्ने क्रम जारी छ ।
विकास बदनाम भयो, नाम बदलेर समृद्धि बनाइयो तर पञ्चायतकालमै विकास किन असफल भयो भन्नेबारे बहस गर्न समृद्धिका नेताहरू तयार छैनन् । ६ दशकसम्म प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै कृषि एक परियोजना बन्यो । फगत कागजमा मात्र प्राथमिकता तोकियो । विदेशी सहयोग ओइरिएकै हो कृषिमा । पञ्चायतकालभरि भारत, अमेरिकाजस्ता मुलुकले कृषिमा उल्लेख्य सहायता दिएको तथ्यांक छ तर कृषि दिनदिनै किन ध्वस्त भयो ? किसानहरू किन अपमानित भए ? एक किसान आफ्नो सन्तानलाई किसान बनाउन चाहँदैन । पढाइलेखाइ गर्नु शारीरिक श्रमबाट मुक्त हुन हो भन्ने मान्यता कसले बनायो ?
जमिनबाट भरोसा उठ्यो भने समाज वा देशले प्रगति गर्दैन । कागजमै सही, यही राज्यले पटकपटक भनेको छ– कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । औद्योगीकरणको जग पनि कृषि नै हो । पूर्वाधार विकास अवश्य गर्नुपर्छ तर दौडनका लागि पहिला शरीर ठीक हुनुपर्छ । रेल, एयरपोर्ट बनाउने तर त्यसबाट जनशक्ति निर्यात गर्ने हो कि हाम्रा उत्पादन ? राज्य र नागरिक बिरामी भइरहे पूर्वाधार उपयोग पनि अरू कसैले गर्छ । परनिर्भरतालाई थप संस्थागत गर्न मात्र पूर्वाधार विकास गर्ने अवधारणा पञ्चायतकालमै असफल भइसकेको हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण कृषि हो, जुन हरेक दशक ओरालो यात्रामा छ ।
कृषि र श्रमलाई अपमानित गर्ने अर्थराजनीतिले नेपाली समाजलाई कृषिबाट निरन्तर बाहिर लखेटिरहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा सधैं गरिएको छ । कृषकलाई अनुदान दिने नीति पनि नभएको होइन तर न त राजनीतिक नेतृत्व, न कर्मचारीतन्त्र, कसैको पनि दिमागमा कृषि प्राथमिकतामा पर्दैन । किसानहरू अज्ञात नियतिको हातमा एक्लै छन् । अहिले शक्तिशाली भनिएका स्थानिय तह छन् तर अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीको प्राथमिकतामा बाटो छ । डोजर र गाडी किन्ने कुराले नेतृत्वमा रहेकाहरूको दिमागमा घर बनाएको छ । आफ्ना कृषि र वनजस्ता स्रोतको समृद्धि गर्ने तर्क कसैले बुझ्दैन ।
सञ्जीवनी फर्मकै छलफलमा सहभागी महालक्ष्मी नगरपालिका (ललितपुर) का कर्मचारी मधु मिजारले सुनाए– अधिकांश स्थानीय तहमा कृषिका लागि बजेट छैन । कृषि प्राविधिकहरू फुर्सदमा छन् । न कुनै तथ्यांक छ, न तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यक्रम । किसानहरूले भरोसा गर्न सक्ने न स्थानीय निकाय छ, न कुनै सरकारी कार्यालय, न त सरकार नै ।
एमसी रेग्मीले आफ्नो अर्थशास्त्रीय इतिहासका पुस्तकमा अनुपस्थित जमिनदारको व्याख्या गरेका छन् । उन्नाइसौं शताब्दीमा त्यस्ता अनुपस्थित जमिनदार काठमाडौं वा पहाडका कुनै केन्द्रमा बस्थे । मधेसका जमिनमा उनीहरूको स्वामित्व हुन्थ्यो । केवल जमिनको आम्दानीसँग उनीहरूलाई मतलब थियो । जो जमिनमा काम गर्थे, उनीहरूको स्वामित्व थिएन । जसको मौलो जमिनमा होइन, सत्ताको चाकरीमा गाडिएको थियो, तिनीहरूले जमिनलाई माया गर्ने प्रश्नै भएन । त्यस्तै अनुपस्थित (नक्कली) किसानले आजसम्म पनि राज्यले दिने कृषि अनुदान वा आइएनजीओले चलाउने कृषि प्रोजेक्टको पैसामा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयको रेकर्डमा त्यस्ता नक्कली कृषि परियोजनाको चाङ भेट्न सकिन्छ ।
कृषिप्रति घृणा र किताबप्रति प्रेम जगाउने काम पञ्चायतको अर्थराजनीतिले गरेको थियो । किताब र कृषि, किताब र श्रम मानौं एकअर्काका दुस्मन हुन् जस्तो । पढ्नु भनेको कृषिबाट भाग्ने उपाय हो भनेझैं भयो । यो संस्कृति समाजको जरासम्म पुर्‍याउने राज्यसत्ताले समाज अडिएको आधारभूमि नै भ्वाङ पारिदिएको छ । त्यसैले कृषि पढ्ने विद्यार्थीले कृषिसँग होइन, कृषि कार्यालयको जागिरसँग प्रेम गर्न सिक्यो । कर्मचारीतन्त्रमा मालपोत वा भन्सार स्वर्ग, कृषि र हुलाक आदि नर्कजस्तो ठान्ने मानसिकता त्यसै बनेको होइन ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाकै कृषि प्राविधिक विवेक महत खुसी छैनन् । उनीसँगै कृषि पढेका धेरै साथी विदेश गइसकेका छन् । जो कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गरे, उनीहरू जागिर खानेभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने शंकामा छन् । कृषि पढेको नयाँ पुस्तासमेत कृषिसँग तर्सिरहेको छ । महतले सुनाए, ‘हामी बीउबिजनमै परनिर्भर छौं । स्थानीय बीउबिजन गुमाउने र विदेशी बीउबिजनमा भर पर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकको परनिर्भरता हातमा उठाएको गाँससम्मै छ भन्न सकिन्छ ।
सरकार कृषिका यी जरुरी सवालको जवाफ खोज्ने उत्साहमा छ ? छैन । एकातिर व्यावसायिक किसान आन्दोलनको योजना बुन्न बाध्य छन् । आफूले उब्जाएको फसलले बजार र मूल्य पाउँछ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई छैन । व्यावसायिक कृषिमा लाग्नु पनि एक अज्ञात यात्रामा निस्कनुजस्तो छ । अर्कोतिर परम्परागत कृषि पेसाबाट पलायन हुने जनसंख्या ठूलो छ । कृषि र किसानप्रति सम्मान जगाउने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन ।
मिडियामा चर्को स्वरमा घन्किरहेको समृद्धिको नारा खेतमा पुगिसकेपछि एक सुदूरको सुसेलोजस्तो सुनिन्छ । जगबाट उप्किरहेको समाज, उखेलिएको बिरुवाजस्तो हुन्छ । समृद्धिको एजेन्डाले नेपाली समाजरूपी बिरुवालाई थप उखेल्ने कि जगमा लगानी गर्ने ? सरकारलाई यो सवाल नै सवालजस्तो लाग्ला ? हालसम्मको लक्षणले त्यस्तो देखाउँदैन । बारीमा किसान तर्साउने बुख्याँचा राखेर समृद्धि आउँदैन, यो पक्का छ ।
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७५ ०७:५५